people Nepal » बिहान सेक्स गर्दा हुने ७ फाइदाहरु बिहान सेक्स गर्दा हुने ७ फाइदाहरु – people Nepal
बिहान सेक्स गर्दा हुने ७ फाइदाहरु
सामान्य त धेरै जसो मान्छेहरु रातको समयमा यौन सम्पर्क गर्न रुचाउँछन । नेपाली समाज र ब्यस्त दैनिकिले गर्द पनि साझ सुत्ने बेला मात्र सेक्स गर्ने धेरैको बानी छ । यौन सम्पर्क गर्ने महतवपूर्ण समय भनेको अधिकांशका लागि रातको एकान्त समय नै हो । हरेक प्राणीमा यौनेच्छाको चाहना हुनु शास्वत सत्य हो । यो प्रकृतिले दिएको उपहार हो । यौन सम्पर्कबाट मानिसलाई धेरै फाईदा हुन्छ । जसले यौन सम्पर्कलाई यौन यौन प्यास मेटाउने माध्यम मात्र ठान्छ जसका लागि यो समय उपयुक्त लाग्ला ।
तर जसले यौन सम्पर्कबाट शारीरिक तथा मानसिक फाईदा पनि लिन चाहन्छ भने अबदेखि बिहानको समयमा यौन सम्पर्क राख्ने बानी बसाले हुन्छ । बेल्फास्टको क्विन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले दाबी गरे अनुसार जुन दम्पतीले हप्तामा तीन पटक बिहानको समयमा यौन सम्बन्ध राख्छ उनीहरु शारीरिक तथा मानसिक रोग लाग्नबाट धेरै मात्रामा बच्न सफल हुन्छन् । त्यसै गरी यो कुरामा पनि ध्यान दिनुस की यौन सम्पर्क एक किसिमको मनोराजनात्मक खेल हो । एकैचौटी खेल खेल्दा बढी थकित भईन्छ त्यसैले यौन सम्पर्कको बेला कम्तिमा २० मिनेट सम्म बेड गेम खेल्नुपर्छ । जसले गर्दा दुवैजना तृप्त भईन्छ र यौनसम्भोगको मजा आउँछ ।
२. बिहान गरिने यौन सम्पर्कले माईग्रेन टाउकोको एउटा भागतिर मात्र कडा पीडा हुने रोग रोग निको गर्नमा ठूलो मद्दत गर्छ ।
३. यौन सम्पर्क सबैभन्दा उत्तम व्यायाम हो । यो प्रक्रियामा झण्डै तीन सय क्यालोरी शक्ति खपत हुन्छ । यो व्यायामले गर्दा शरीरको तौलमा नियन्त्रण राख्नुको साथै ती जोडीलाई मधुमेह रोग लाग्ने खतरा हुँदैन ।
७. स्कुल अफ मेडिसियसनका सोधकर्ताहरुका अनुसार बिहान गरिने यौन सम्पर्कले महिलालाई गर्भावस्थाको अवधिमा हुने पीडाको असर एकदम न्युन रुपमा मात्र पर्छ । तर याद राख्नुहोस् सोधकर्ताहरुको अनुसन्धानले बताए अनुसार हप्तामा तीन पटकभन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्नाले तपाईको शरीरको रोग प्रतिरोधक शक्तिमा ह्रास आउँछ । हप्तामा तीन पटक सम्म गरिने यौन सम्पर्कले शारीरिक र मानसिक स्फुर्ति बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा